ELDORADO တစ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာ3လွယ်ကူခြေလှမ်းများ
တာဝန်ရှိသူတဦးက Sparta ဝဘ်ဆိုဒ်ကိုအသုံး
1. တစ်ဦး SPA ကုမ္ပဏီလိပ်စာရယူရန်။
2. ELDORADO Join ။
3. Sparta cryptocurrency Buy နှင့်တစ်ဦးလှူဒါန်းမှုပါစေ။
အာရုံစူးစိုက်မှု, ELDORADO join ဖို့, သာတရားဝင် Sparta က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ် SIGEN platform ပေါ်တွင်ဖန်တီး SPA ကုမ္ပဏီလိပ်စာကိုအသုံးပြုပါ။
ELDORADO သာ Sparta ကိုအသုံးပြုချိန် မှစ. , သင်ပထမဦးဆုံး System ကို join အပေါင်းတို့နှင့်ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိရန် SPA ကုမ္ပဏီလိပ်စာဖန်တီးရမည်ဖြစ်သည်။
ရဲ့တစ်ဦး SPA ကုမ္ပဏီလိပ်စာခံယူနှင့် SIGEN platform ပေါ်တွင် cryptocurrency ဝယ်ဖို့ဖို့ဘယ်လိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြပါစို့။
SIGEN.pro အတူ Register နှင့် SPA ကုမ္ပဏီလိပ်စာလက်ခံရရှိသည်။
ထိုသို့ကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါတယ်။ သင့်ရဲ့မှတ်ပုံတင်ကိုအောင်မြင်စွာပြီးစီးခဲ့ပြီးပါပြီ! အခုဆိုရင်သင်ပလက်ဖောင်းအပြည့်အဝအားသာချက်ယူနိုင်ပါတယ်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့အနာဂတ် login အဘို့, "တွင် Log" နှင့်သင်၏ e-mail နဲ့ password ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဝင်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
တစ်ဦး SPA ကုမ္ပဏီလိပ်စာခံယူဖို့ဘယ်လို
စာရင်းထဲက "SPA ကုမ္ပဏီ" ကိုရွေးချယ်ပါ။
သင်သည်သင်၏ SPA ကုမ္ပဏီလိပ်စာမြင်လိမ့်မည်။ ကော်ပီကူးခြင်းနှင့်ကယ်!
အဆင့် 1 ပြည့်စုံပါ! သငျသညျထားပြီး SIGEN ပလက်ဖောင်းဝင်ရောက်ဖို့သင်၏ login / password ကိုဖြစ်သည့်တစ်ဦး SPA ကုမ္ပဏီလိပ်စာပိုင်ဆိုင်တယ်။
ELDORADO join ဖို့2အဆင့်သို့သွားပြီး!
အဆင့် II ကို
အခုတော့သင်တစ်ဦးသည် SPA လိပ်စာရှိသည်နှင့်သင် ELDORADO အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ပါပဲ။
ဝက်ဘ်ဆိုက် https://my.eld.club အပေါ်ပင်မစာမျက်နှာသို့သွားရန်။
စာမျက်နှာအောက်ကိုဆင်း; သင့်ရဲ့ SPA ကုမ္ပဏီလိပ်စာသက်ဆိုင်ရာအကွက်ရိုက်ထည့်ပါ။
သငျသညျ ELDORADO ၌သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ကိုရိုက်ထည့်ပါပါလိမ့်မယ်။ ထိုသို့ကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါတယ်။ သင့်အနေဖြင့်စနစ်အတွက်ပါပဲ။ အဘယ်သူမျှမစကားဝှက်ကိုလိုအပ်ပါသည် - သင်သာတစ်ဦး SPA ကုမ္ပဏီလိပ်စာလိုအပ်ပါတယ်။
တစ်ဦးလှူဒါန်းမှုအောင် - ထိုအခါလူအပေါင်းတို့ကိုသင်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအဆင့်မှ3Go!
အဆိုပါ Sparta cryptocurrency အဆိုပါ SIGEN လဲလှယ် Buy နှင့်တစ်ဦးလှူဒါန်းမှုပါစေ။
ဘယ်လို BTC သို့မဟုတ်အခြား cryptocurrency ငွေသွင်းမှ:
ပထမဦးစွာသင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်သင်တို့အဘို့ Sparta ကိုဝယ်ချင်နေတဲ့ cryptocurrency ငွေသွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တို့အဘို့အ Sparta ကိုဝယ်ချင် cryptocurrency ရွေးချယ်ပါ။ ပုံသေတန်ဖိုး BTC ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိပ်စာမှဒင်္ဂါးပြားလွှဲပြောင်းရန်မည်သည့်နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, ဒီလိပ်စာရန်သင့် BTC ပိုက်ဆံအိတ်ကနေလွှဲပြောင်းစေ။
ထိုသို့ကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါတယ်။ အတည်ပြုချက်၏လိုအပ်သောအရေအတွက်ကိုပြီးနောက်သင်၏ငွေလက်ကျန်ကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်နှငျ့သငျ SIGEN အပေါ် Sparta ကိုဝယ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
: Sparta ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
SIGEN ပေါ်ရှိ "ချိန်း" tab ကိုဖွင့်ပါသို့မဟုတ် link ကိုလိုကျနာ - https://sigen.pro/trading။
တစ်ဦးကုန်သွယ် pair တစုံကိုရွေးချယ်ပါ။ ရဲ့ဥပမာတစ်ခုအဖြစ် SPA ကုမ္ပဏီ / BTC ယူကြပါစို့။
တည်ဆဲယ်ယူရန်အမိန့်အာရုံစိုက်။ သူတို့ကအခြားအသုံးပြုသူများအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ သငျသညျချက်ချင်းသည်ဤအမိန့်ကို အသုံးပြု. / ရောင်း cryptocurrency ကိုဝယ်လို့ရပါတယ်။
ညာဘက်အစိမ်းရောင် form မှာဖြည့်ပါဟာဝယ်နိုင်ရန်၏စျေးနှုန်းနှင့်ပမာဏကိုရိုက်ထည့်ပါ။ အဆိုပါထဲသို့ဝင်စျေးနှုန်းလက်ရှိရောင်းပါအမိန့်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်လျှင်, ငွေပေးငွေယူချက်ချင်းကွပ်မျက်ခံရလိမ့်မည်။ သင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောစျေးနှုန်းဝင်လျှင်, သင်အခြားအသုံးပြုသူများသည်သင်၏အမိန့်တုံ့ပြန်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ချက်ချင်းလက်ရှိစျေးနှုန်းမှာဝယ်ယူရန်အများဆုံး SPA ကုမ္ပဏီပမာဏကိုတွက်ချက်ဖို့ Right-လက်အစိမ်းရောင်ပုံစံအတွက်ရရှိနိုင် BTC ငွေပမာဏကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
"ဝယ်" ကိုနှိပ်ပါ။ ထိုသို့ကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါတယ်။ ရွေးချယ်ထားသောစျေးနှုန်းအပေါ်မူတည်ပြီးသင်ကချက်ချင်း Sparta ကိုဝယ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဝယ်ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖန်တီးပါလိမ့်မယ်ဖြစ်စေ။ (သင်က၎င်း၏လက်ရှိစျေးနှုန်းမှာ Sparta ကိုဝယ်ခြင်းငှါစောင့်ဆန္ဒရှိချင်ကြပါဘူးလျှင်သင်အမြဲသင့်ရဲ့အမိန့်ပယ်ဖျက်နိုင်သည်။ )
ELDORADO မှ Sparta လွှဲပြောင်းရန်ကဘယ်လို
ယခုတွင်သင်သည် Sparta ဝယ်ကြပါပြီ, သင်တို့ ELDORADO အတွက်လှူဒါန်းမှုစေနိုင်သည်။
လက်ဝဲလက်ဆုတ်ခွာပုံစံမှာတော့သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ပါနဲ့ Two-factor authentication သင့်ရဲ့ type ကိုရွေးချယ်ပါ။ ပုံသေတန်ဖိုး e-mail ကိုအကြောင်းကြားစာဖြစ်ပါတယ်။ "တောင်းဆိုခြင်းကုဒ်" ကိုနှိပ်ပါ။
သင့်ရဲ့ e-mail, အကောင့်သို့ Log, SIGEN ကနေမက်ဆေ့ခ်ျကိုဖတ်ပါနှင့်ကုဒ်ကို copy ။
သက်ဆိုင်ရာ box ထဲမှာ code ကိုရိုက်ထည့်ပါနှင့် "ငွေထုတ်ခြင်း" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ပမာဏကိုညွှန်ပြ - အများဆုံးပြုလုပ်ထားကြ၏။
ရန် Sparta ပေးပို့ဖို့ SPA ကုမ္ပဏီလိပ်စာဖော်ပြသည်။ သင်က ELDORADO စနစ်အတွက်သင်၏ "လှူဒါန်းမှု address 'ရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် Sparta ကိုတိုက်ရိုက် ELDORADO ထံသို့စေလွှတ်မည်ဖြစ်ပြီးအချို့မှုနှုန်းမှာကြီးထွားပါလိမ့်မယ်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်ထဲမှာလိပ်စာကော်ပီကူးခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ရာအကွက်ထဲသို့ paste ။
ထိုသို့ကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါတယ်။ တချို့ကမိနစ်အကြာကသင်၏လှူဒါန်းမှုသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်ထဲမှာဖော်ပြပါတယ်မည်ဖြစ်ပြီးတိုင်း 8 မိနစ်ကြီးထွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာတစ်လလျှင် 30% ပဲ!
အဆိုပါ SIGEN လဲလှယ်အပြင်, သငျသညျမြားကိုလညျး Sparta ကိုဝယ်နိုင်သည်
အခြားအ cryptocurrencies များအတွက် Sparta တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေတစ်ဆင့် - //sparta.top/my
အဆိုပါ SIGEN exchanger ကနေတဆင့် - ကအစာရှောင်ခြင်းရဲ့နှင့်မျှမတို့မှတ်ပုံတင်လိုအပ်ပြီး: https://sigen.pro/trading/swap ။
Fiat ငွေ SIGEN ရဲ့ P2P ပလက်ဖောင်းမှတဆင့် - https://sigen.pro/react/trade/SPA/ ။
BTC https://btc-alpha.com/exchange/SPA_BTC/ နှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ https://btc-alpha.com/exchange/SPA_USD/ များအတွက် btc-alpha-လဲလှယ် via ။
ဤအမှုနည်းလမ်းများသုံးပြီး Sparta ဝယ်ယူပေါ်နှင့် ELDORADO ထံမှရန်ပုံငွေများဆုတ်ခွာအပေါ်လမ်းညွှန်ချက်များအပါအဝင်အားလုံးနောက်ထပ်လမ်းညွှန်ချက်များ, //my.eld.club/guides.html မှာ "လမ်းညွှန်များ" အပိုင်းများတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်ရှိပါတယ်င် - သင် ELDORADO မှမဆိုငွေပမာဏကိုလှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။
သင်ကတိုင်းစက္ကန့်လုပ်နိုင် - သငျလိုခငျြသကဲ့သို့သငျအဖြစ်အများအပြားအလှူငွေစေနိုင်သည်။
သင်သည်မည်သည့်အချိန်ကသင့်ရဲ့လှူဒါန်းမှု + အမြတ်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
ရန်ပုံငွေများကိုသင် ELDORADO ပေါ်တွင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့် (ရုံး) သို့ log ရန်အသုံးပြုသည် SPA လိပ်စာမှထုတ်ယူပါလိမ့်မည်။
ငါတို့သည်သင်တို့အနေနဲ့ပျော်စရာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဆန္ဒရှိ! အကောင်းဆုံးပတ်သတ်ပြီး, ELDORADO ရေးအဖွဲ့